MACLUUMAADKA IYO SAWIRRADA TARANKA UGAARSIGA TERROR DOG DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirrada Taranka Ugaarsiga Terror Dog Dog
Monty the Decker Ugaarsiga Terrier ee 2 sano jir ah— 'Monty waa 2 jir Decker ugaarsi Terrier sidoo kale loo yaqaan' Giant Rat Terrier '. Wuxuu run u yahay magaciisa waana a ugaadhsade run ah . Marwalba wuu banaanyahay ugaarsi oo wax qabta jiir , bakaylaha Iwm waa eey weyn oo beer ah wuxuuna ku fiican yahay la dhaqanka xoolaha badankood. Wuxuu leeyahay dareen gaar ah lo'da . Isagu si fiican ugama soo baxo digaag maadaama dareenkiisa ugaarsiga uu ahaa mid aan macquul aheyn in la jebiyo. Isagu waa weyn yahay dadka oo dhan, carruurta iyo dadka waaweyn. Isaguba aad buu u yahay eey saaxiibtinimo, laakiin sababta oo ah ugaarsi la’aantiisa wuxuu u baahan yahay in si dhow loola socdo eeyaha yaryar . Monty miisaankeedu waa 35lbs waxayna u baahan tahay a jimicsi badan . Isagu sifiican ugama soo bixi lahaa an guri dabaq ah qaab nololeedka oo uu ugu farxadda badan yahay markii uu xor ka yahay daaq furan. Si dhakhso leh ayuu wax u bartaa waana eey aad u caqli badan. Isagu waa orod badan oo had iyo jeer yimaaddaa marka loo yeedho . Isagu waa eey dhiirrigeliya cunno, laakiin si fiican buu ula shaqeeyaa tababarka mana aha tuugsade. Aad buu daacad u yahay inkasta oo uu yahay 35lbs oo keliya laakiin waa eey aad u qalbi adag. Isagu maahan wax sheeg. Waxaad qaadi doontaa oo kaliya Monty oo ciyaya haddii ay jiraan nooc ka mid ah ugaadhsiga hortiisa. Isagu waa inta badan eey aad u xasilloon oo gabi ahaanba uma faraxsan yahay sida kuwa kale oo badan oo argaggixiso ah. '
Terrier Jiirka Decker
Terrier Jiir Weyn
Decker ugaarsiga Terrier waa eey si fiican u muruqsan oo leh laab qoto dheer, garbaha adag, qoorta adag iyo lugaha xoogga leh. Jidhkiisu waa is haysta laakiin hilib leh. Dheguhu way toosnaan karaan ama way jabi karaan waana la qaadi karaa iyagoo kacsan marka eeyga soo jeedo. Waxay ku dhalan kartaa dabo gaaban ama dherer dherer ah, mid kasta waxaa looga tagayaa xaaladdiisa dabiiciga ama waxaa lagu xiraa laba maalmood da'da. Midabada jaakada waxaa ka mid ah luul, sabar, shukulaatooyin, casaan iyo cadaan, seddex-dhibic, casaan adag, madow iyo cagaar, buluug iyo cadaan iyo guduud cas. Kalkaaliyeyaasha ka welwelsan eeyaha shaqeeya ma ahan kuwa buuq badan oo ku saabsan waxyaabaha gaarka ah ee muuqaalka.
Terrier-ka ugaarsadeyaasha 'Decker' waa eey caqli badan, feejignaan leh oo jecel. Waa mid baaritaan badan oo noole ah. Eygan kalgacalka badan ayaa wehel u ah kuwa ku raaxeysan doona eey firfircoon. Waxay ku fiican yihiin carruurta, gaar ahaan haddii laga soo koriyey iyaga oo ka soo baxay puppy. Iyagu waa, inta badan, saaxiibtinimo shisheeyaha. Hagayaasha ugaarsiga Decker waxay sameeyaan ilaalin wanaagsan. Eeyahaani waa kuwo deg deg badan, aad u ciyaar badan mana ahan kuwa wax dhoofiya. Dabeecada eeyahaani waa mid saafi ah. Dabeecadda, feisty, cabsi la'aanta waxaa laga heli karaa nooca ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'terriers'. Waxay jecel yihiin inay ka farxiyaan oo ay ka jawaabaan oo ay u soo qaataan tababarka si ka dhakhso badan eeyaha badankood. Decker ugaarsiga Terrier waa eey aad u edeb badan, edegsan. Way fududahay in la tababaro, aadna u xiiseeyo barashada iyo ka farxinta milkiilaha. Waxay jecel yihiin inay ku raacaan iyo inay sameeyaan waxaad samaynayso. Iyagu sidoo kale waa dad dabbaasha aad u wanaagsan, oo aan bashful ama cabsi lahayn wax dhibaato ahna ku qabin biyaha. Waxay sameeyaan eeyo beeraha wanaagsan iyo sidoo kale eeyo qoys oo aad u fiican oo loogu talagalay xayawaanka iyo wehelnimada. Eygan adag ayaa loo adeegsadaa ugaarsiga safarrada iyo sidoo kale shaqo cabsi leh. Eeyaha waaweyn ayaa si fudud ula qabsan kara qoysaska carruurta leh ama aan lahayn. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka taas oo ay ku jiri karaan arrimaha dhuleed. Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka 18 - 23 inji (45 - 58½ cm)
Miisaanka 25 - 38 rodol (11 - 17 kg)
Tercker ugaarsiga Decker maaha eeyga ugu fiican nolosha guryaha, laakiin wuu fiicnaan karaa haddii ay banaanka u baxaan jimicsi badan oo maalinle ah. Iyagu si caddaalad ah ayey gudaha ugu firfircoon yihiin waana inay lahaadaan ugu yaraan daarad dhexdhexaad ah. Decker Ugaadhsiga ugaarsadayaasha ah ayaa jecel inay wax qotaan, waxayna si fudud uga soo bixi karaan deyr ood leh. Haddii ay haystaan ​​ilaalin habboon, waxay awoodaan inay waqti fiican ku qaataan dibadda. Waxay jecel yihiin inay guriga dhexdiisa iyo dibaddaba ku ciyaaraan. Waxay samaystaan ​​wehel ey ey ugaarsada.
Terrier-ka Ugaadhsiga Decker wuxuu u baahan yahay jimicsi fiican. Noocan ayaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta socod dheer ama orod. Waa inay lahaataa ugu yaraan 20-30 daqiiqo maalintii, laakiin wax badan ayey ku raaxeysan doontaa. Noocani wuxuu ku raaxeeyaa ciyaaro adag iyo rooga bannaanka.
Qiyaastii 15-18 sano
Qiyaastii 5 ilaa 7 eyyo
Terrier-ka Ugaadhsiga Decker way fududahay in la xannaaneeyo. Shanlaab mar mar ah iyo cadayasho si looga saaro timaha dhintay ayaa ah waxa kaliya ee ay u baahan tahay.
Terrier-ka ugaarsadeyaasha Decker wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Jiir yar oo loo yaqaan Decker ama Decker Giant. Nooca waxaa loogu magac daray soosaaraha Milton Decker, oo abuuray wehel ugaarsi ballaaran oo ka socda heerka Jiirka Jiirka. Nooca waxaa aqoonsan Ururka Xiriiriyaha Jiirka ee Jiirka (NRTA).
DHTR = Diiwaanka Terrier-ka ugaarsiga ugaarsadeyaasha
Monty the Decker Ugaarsiga Terrier ahaan eey yar oo ah 3 bilood jir
Moose the Decker Ugaarsiga Terrier ahaan eey yar oo jira 5 bilood
Monty the Decker Ugaarsiga Terrier ee 2 sano jir
Monty the Decker Ugaarsiga Terrier ee 2 sano jir ah oo bannaanka la jooga Moose 5-bilood jir ah eey Decker Ugaarsiga Terrier eey ah.
Macluumaadka Taranka Jiirka Jiirka Jiirka
Macluumaadka Taranka Sirdoonka Dog-la'aanta ee Mareykanka Timo-la’aanta ah
Liiska eeyaha Jiirka ee Jiirka ah
goorta la bilaabayo jabinta eey
adhijir Jarmal iyo weli Bernard isku darka
feeryahan iyo isku-darka dhadhanka dahabka
cabirka eeyaha eskimo americanka
shetland sheepdog Jarmalka adhijir isku dhafka ah
10ka eeyood ee ugu qaniinsan
lhasa apso oo lagu qasay chihuahua